1. Fito taona nivadiana ary telo anaka izao i Blake Lively sy Ryan Reynolds.
Felana : «maman » miara-lehibe amin’ny zanany
Renim-pianakaviana miasa tena, ary maro vavikely ao an-trano no vahinin’ny Jejoo anio. 15 taona ny zanany vavimatoa ary 11 taona ny faravavy.
RAFANOMEZANTSOA ANNICK Mahasoa ny vehivavy ny miditra anaty fikambanana
Filoham-boninahitry ny fikambanan’ny vadin’ny pôlisy sy ny pôlisy vavy FIVAPOVA Rafanomezantsoa Annick, vadin’ny Ministry ny filaminam-bahoaka ankehitriny.
Le en rouge, paragraphe fanampiny. Le en jaune, pragraphe nasiana modif dia tonga dia alatsaka sisa
Romy VOOS : “Mila mandray andraikitra amin’ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy” Rtoa Romy VOOS indray no vahinin’ny Jejoo anio. Tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny orinasa Filatex sy ny British Petrolium ny tenany. Ankoatra ireo anefa dia vehivavy mavitrika tanteraka amin’ny sehatra asa maro koa ramatoa VOOS.
Ony, Miss Cl’Hush : Miisa 50 eo ny kirarony, tenisy no tena betsaka…
Ony Nandrianina, tanora mpandraharaha mpitantana ny Miss Cl’Hush Antanimena no mivahiny eto amin’ny Jejoo anio.
Rtoa Maud Vuyelwa Dlomo, Masoivohon’i Afrika Atsimo eto Madagasikara :
Tokony hifanohana ny samy vehivavy Malagasy ahafahana mandroso. Vehivavy nisedra dingana maro saingy nilofo sy nikiry mba ho tafita no vahinintsika anio. Rtoa Maud Vuyelwa Dlomo, masoivohon’ny afrika atsimo eto madagasikara no mizara ny dingana nolalovany ary mitondra hafatra mihabo hatrany ho an’ireo vehivavy Malagasy. Resadresaka niarahana taminy
Valiha : Numero 16
Ø Nom : Andriamahefa Valiha Tescina Ø Age : 17 ans Ø Classe : 1ère, Collège Saint Michel Amparibe
Andie : Numero 13
Ø Nom : Andriana-Nambinintsoa Ny Hajaina-Kantosoa Ø Age : 17 ans Ø Classe : 1ereL Ø Plus tard, quel métier voudrais-tu faire ? Plus tard je veux être journaliste .
Ny zoma lasa teo no teraka ny zanaka fahatelon’ ireto mpilalao sarimihetsika roa ireto.
Mianadahy moa ny zanak’izy ireo voalohany fa mbola tsy fantatra kosa ilay farany na lahy na vavy. Tsy mbola fantatra torak’izany koa ny anarany. Tsy olana amin’izy ireo mihitsy ny hiteraka am-polony, araka ny nambaran’ny namana akaiky azy ireo.
2. Efa volana vitsivitsy izay no hatahorana ny fahasalaman’i Phill Collins. Nandeha “fauteuil roulant” no nahitana azy tao Kanada raha hamonjy ny “Energy Center d’Atlanta”. Nianjera mantsy izy, ny faran’ny volana septambra lasa teo, nandritra ny fampisehoana natolony ka nanehoan’ny zanany ny fifehezany mitendry aponga maro afitsoka. Talohan’izany izy efa mitondra tehina rehefa mandeha ary tamin’ny seho natolony tamin’ny volana novambra 2018 tany Miami dia efa nisy solon-tongotra vita amin’ny hazo izay mihitsy nanampy azy nitsangana. Na eo aza nefa io tsy fahasalamany io dia tsy manaiky ny hijanona i Phill Collins, izay mbola 68 taona, fa hanohy ny fitetezam-paritra tanterahina hatrany. “Not dead yet” na hoe “ :Tsy mbola maty” no anarana nampitondrainy izany ka inoana fa tsy hisy sampona tokoa.